खु:शीको खबर : कोरोना संक्रमण बारे कोरियाबाट आयो आशालाग्दो खबर !!! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /International/खु:शीको खबर : कोरोना संक्रमण बारे कोरियाबाट आयो आशालाग्दो खबर !!!
2,1032minutes read
निको भएपछि पनि कोरोना भाइरसको पोजिटिभ पाइएकाहरू संक्रामक नहुने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । कोरियाको सरुवा रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम महाशाखा सीडीसीले कोरोनाबाट निको भएर पुनः देखिएकाहरू संक्रामक नरहेको फेला पारेको हो ।
रोगीहरूको सम्पर्कमा आएका ७९० जनालाई रोग नसरेको पाइएको छ । यसले गर्दा कुनै कुनै क्षेत्रमा लकडाउन खोल्नु सुरक्षित हुने संकेत पाइएको सीडीसी टोलीको भनाइ छ । दोस्रोपटक कोरोना पोजिटभ पाइएका रोगीबाट संकलित भाइरस नमूनाहरू प्रयोगशालामा समेत नबढेको अनुसन्धाताहरूले पाए ।
यसको अर्थ हुन्छ– ती रोगीहरू पुनः संक्रमित भएका हैनन्, बरू तिनले मरेका भाइरसको कणहरू त्यागेका हुन् । दक्षिण कोरियाले अघिल्लो महिना निको भइसकेको थुप्रै रोगीलाई पुनः संक्रमण देखिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि यो अध्ययनले राहतको खबर दिएको छ ।
क्रिमसन अस्पतालमा कोरोनाको कारण तेस्रो मृ’त्यु भएका गुल्मीका कोरोना संक्रमित बारे परीवारको यस्तो खुलासा !
बुटवल, जेठ ९, गुल्मीका कोरोना संक्रमित ४१ वर्षीया पुरुषको मृ’त्यु भएको छ। बुटवलको क्रिमसन अस्पतालमा उनको मृ’त्यु भए पनि श’व व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मृ’तकका आफन्तले अस्पतालको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृ’त्यु भएको भन्दै श’व उठाउन मानेका छैनन्।जेठ १ गते अस्पतालमा भर्ना गरिएका मृ’तकलाई भेन्टिलेटरमा उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको थियो।
उपचारकै क्रममा बिहीबार बिहान सवा ७ बजे उनको मृ’त्यु भएको हो। आफन्तले कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि डाक्टरहरूले उपचार नै नगरेको आरोप लगाएका छन्। ‘पीपीई नभएको भन्दै उपचारमा कोही पनि गएनन्, हामी नजिकैको कोठामा क्वारेन्टाइनमा बसेका थियौं, भिनाजुलाई राखेको कोठामा डाक्टरहरू गएको देखेनौं,’ मृ’तकका सालाभाईले भने।
उनले घटनाका छानबिन र अस्पतालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेको बताए। जेठ १ गते उपचारका लागि क्रिमसन अस्पतालमा आएका उनको दुई गते स्वाब संकलन गरिएको थियो। जेठ ५ गतेमात्रै उनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो। भैरहवास्थित प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण भएको थियो। मृ’तक पुरुष शिक्षक हुन्।
गुल्मी मदाने–६ का उनमा कोरोना कसरी संक्रमण भयो भन्ने अझै खुलेको छैन। जण्डिस, रुघा र ज्वरो आएपछि उनी स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचारका लागि पुगेका थिए।त्यहा निको नभएपछि उनी मोटरसाइकलमा अर्घाखाँचीको छाया पोलिक्लिनिकमा आएका थिए। त्यसपछि मात्रै उनी एम्बुलेन्समा बुटवल आएका थिए।
अस्पतालको आईसियुमा रहेका उनलाई कृतिम श्वासप्रश्वास गराइएको थियो। तीन दिनसम्म भेन्टिलेटरमा रहे पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएको अस्पतालका चिकित्सकहरूले बताएका छन्। ‘अन्य अंगमा समस्या थिएन, फोक्सोको समस्या थियो,’ क्रिमसन अस्पताल मणिग्रामका प्रबन्ध निर्देशक शेखर पोखरेलले भने, ‘स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि बचाउन सकिएन।’
उनमा कोरोना संक्रमितमा देखिने लक्षणहरू थिए। ज्वरो र फोक्सोको समस्या कोरोना खास लक्षण हुन्।उनका भाइले अस्पताल आएर आफैं खाजा खाएका व्यक्ति भेन्टिलेटरमै नजाने दाबी गरेका छन्। ‘बुटवल आएपछि पनि उहाँले आफैंले पाउरोटी र पानी खानुभएको थियो,’ उनले भने। मृ’तकको ढाडबाट पानी निकालिएको थियो। त्यसपछि मात्रै उनको स्वास्थ्य गम्भीर भएको भाइले दाबि गरे।
आफन्तले कोरोना पोजेटिभ रिपोर्टमासमेत शंका व्यक्त गरेका छन्। गाउँमै बसेका उनमा कोरोना लाग्ने सम्भावना नै नरहेको उनीहरूको दाबी छ।श’व व्यवस्थापन गर्ने विषयमा साझ अवेरसम्म छलफल चलिरहेको थियो। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले छलफलपछि श’व व्यवस्थापन हुने बताए।
उनले श’व व्यवस्थापन गर्ने स्थानको खोजी समेत भइरहेको बताए। प्रहरीले विभिन्न स्थानमा श’व गाड्ने स्थल खोजिरहेको छ। एकाध स्थानमा गाड्न नहुने भन्दै अवरोध गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। श’व व्यवस्थापनको जिम्मा भने नेपाली सेनाले गर्नेछ।